Iinkcukacha-manani zokuSetyenziswa kwe-Intanethi 2021: Idatha ayilali 8.0 | Martech Zone
Kwilizwe eliya likhula ngokwamanani edijithali, elenziwa mandundu kukuvela kwe-COVID-19, le minyaka iye yazisa ixesha elitsha apho itekhnoloji kunye nedatha zidlala indima enkulu nebalulekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla. Kuwo nawuphi na umthengisi okanye ishishini elilapha phandle, inye into eqinisekileyo: impembelelo yokusetyenziswa kwedatha kwindawo yethu yale mihla yedijithali ngokungathandabuzekiyo yondile njengoko sisebunzimeni besibetho sethu sangoku. Phakathi kokuvalelwa yedwa kunye nokuvalwa okuxhaphakileyo kweeofisi, iibhanki, iivenkile, iindawo zokutyela kunye nokunye, uluntu lwabutshintsha ubukhulu becala ubukho balo kwi-Intanethi. Njengoko sifunda ukuziqhelanisa neli xesha litsha, idatha ayilali.
Nangona kunjalo, ukubuyisela umva kumaxesha angaphambi kwe-covid, inani ledatha elenziwe kwaye kwabelwana ngalo sele lisanda, nangona kancinci. Oku ngokuqinisekileyo kubonisa ukuba iindlela ze-intanethi zilapha ukuze zihlale kwikamva elibonakalayo, kwaye ukufumaneka kwedatha kuya kuqhubeka nokukhula.
Iipesenti ezingama-50 zeenkampani ziqala ukusebenzisa uhlalutyo lwedatha ngakumbi xa kuthelekiswa namaxesha angaphambi kobhubhane. Oku kubandakanya ngaphezulu kwe-68% yamashishini amancinci ngokunjalo.
Ikhule kangakanani iData?
Malunga ne-59% yabemi bethu behlabathi banokufikelela kwi-intanethi, ngelixa i-4.57 yezigidigidi ingabasebenzisi abasebenzayo - oku malunga nokunyuka kwe-3% ukusuka kunyaka odlulileyo okt 2019. Phakathi kwaloo manani, i-4.2 yeebhiliyoni ngabasebenzisi beselula abasebenzayo ngelixa i-3.81 yeebhiliyoni zisebenzisa imidiya yoluntu.
Ingxelo yeZiko leDatha ka-2021
Ngokujonga indlela i-COVID-19 esinike ngayo ukufikelela kubasebenzi abakude kakhulu, singabanga ngokukhuselekileyo ukuba ikamva lomsebenzi wethu lifikile, kwaye liqala ekhaya! – Ubuncinci okwangoku. Enye indlela yokujonga olu qikelelo ngolu hlobo lulandelayo:
Okwangoku, ikamva lomsebenzi lisekhaya. Ngaphambi kokuvalelwa yedwa, malunga ne-15% yabantu baseMelika bebesebenza ekhaya. Ngoku ivavanyiwe ukuba ipesenteji ikhule yaya kutsho kuma-50%, ezo ziindaba ezimnandi kumaqonga entsebenziswano afana Amaqela eMicrosoft, enomlinganiselo wama-52,083 abantu abajoyina ngomzuzu.
Zoom, ishishini lenkomfa yevidiyo, libone ukwanda okubalulekileyo kubasebenzisi. Iiseshini zabo zosetyenziso lwemihla ngemihla zonyuke ukusuka ngaphezulu kancinci kwezigidi ezibini ngoFebruwari ukuya phantse kwizigidi ezisixhenxe ngoMatshi, ngomndilili wabantu abangama-208,333 abahlangana ngomzuzu ngamnye.
Abantu abangakwaziyo ukunxibelelana ngokobuqu baya besebenzisa incoko yevidiyo. Phakathi kukaJanuwari noMatshi, Google Duo ukusetyenziswa kunyuke ngeepesenti ze-12.4, kwaye phantse abantu abangama-27,778 badibana kwi-Skype ngomzuzu.
Ukususela kuqhambuko, WhatsApp, ephethwe nguFacebook, ibone ukwanda kwepesenti ezingama-51 kokusetyenziswa.
Ngomzuzu ngamnye odlulayo, inani ledatha liyanda ngokukhawuleza; ngoku, oku kuguqulela malunga 140k iifoto eziposwe ngabasebenzisi ngalo mzuzu, kwaye oko nje on Facebook.
Iifemu zabucala ezinje ngoFacebook kunye neAmazon, nangona, ayizizo zodwa ezinedatha. Noorhulumente basebenzisa idatha, owona mzekelo ubonakalayo sisicelo sokulandela umkhondo, esilumkisa abantu ukuba basekufutshane nomntu one-COVID-19.
Oku kuthetha ukuba idatha ngoku ayibonisi zibonakaliso zokucotha ekukhuleni kwayo, kwaye kukho izibalo zokuxhasa eli bango. La manani akanakuthoba isantya nangaliphi na ixesha kungekudala, kwaye aqikelelwa kuphela ukuba anyuke njengoko inani le-intanethi likhula ngokuhamba kwexesha.
Kukho incoko yevidiyo yokunxibelelana, iinkonzo zokuhanjiswa kwe-smartphone yokuodola naluphi na uhlobo lwento, ukusasaza ividiyo usetyenziso lokuzonwabisa, njalo njalo. Ngenxa yoko, idatha iveliswa ngokuqhubekayo ngokuchofoza i-ad, ukwabelana ngemidiya, ukuphendula kwimidiya yoluntu, ukuthengiselana, ukukhwela, umxholo wokusasaza, kunye nokunye.
Kungakanani ukuVeliswa kweDatha okwenzeka kuMzuzu ngamnye?
Gcina ukhumbule ukuba idatha yenziwa yonke iminithi. Makhe sijonge eyona datha yamva nje malunga nokuba ingakanani idatha eyenziwe ngomzuzu wedijithali. Ukuqala ngamanani athile kwicandelo lokonwabisa:
Kwikota yokuqala, enye yeqonga elikhulayo lokusasaza kwi-intanethi Netflix wongeze i-15.8 yezigidi zabathengi abatsha, ukunyuka kwe-16 ekhulwini kwi-traffic ukusuka ngoJanuwari ukuya kuMatshi. Ikwaqokelela malunga neeyure ezingama-404,444 zokusasazwa kwevidiyo
Oyithandayo YouTube layisha malunga ne-500-hrs yevidiyo
Yonke ividiyo edumileyo yokudala kunye neqonga lokwabelana I-Tiktok ifakwa malunga namaxesha angama-2,704
Ukuphakamisa eli candelo ngeengoma ezithile Spotify loo nto yongeza iingoma eziqikelelwayo ezingama-28 kwithala leencwadi layo
Ukuqhubela phambili kumajelo eendaba ezentlalo, eyona nxalenye isisiseko nethandwayo kuluntu lwethu lwe-intanethi.
Instagram, uthungelwano olubalaseleyo lokwabelana ngokubonwayo kwihlabathi, lunezithuba ze-347,222 zabasebenzisi kumabali ayo kuphela, kunye ne-138,889 hits kwiintengiso zeprofayili yenkampani.
Twitter yongeza malunga namalungu amatsha angama-319, igcina amandla ayo ngeememe kunye neengxoxo zezopolitiko.
Facebook abasebenzisi - nokuba millennials, boomers, okanye Gen Z - kuqhubeka ukwabelana malunga 150,000 imiyalezo kwaye kuqikelelwa 147,000 iifoto kwiqonga ethandwa kakhulu kwimidiya yoluntu.
Ngokubhekiselele kunxibelelwano, amanani anyuke kakhulu ukusukela kwixesha langaphambi kwe-covid:
Iqonga lonxibelelwano elikhulayo laMaqela eMicrosoft aqhagamshela malunga nabasebenzisi abangama-52,083
Inani eliqikelelwayo labantu abamalunga ne-1,388,889 benza iminxeba yevidiyo kunye nelizwi
Enye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu iqonga lokuthumela imiyalezo ku-WhatsApp inabasebenzisi abangaphezu kwe-2 yeebhiliyoni abasebenzayo ababelana ngemiyalezo engama-41,666,667.
Ividiyo enikezela ngesicelo iZoom ibamba abathathi-nxaxheba abangama-208,333 kwiintlanganiso
Iindaba zeViral kunye neqonga lokwabelana ngomxholo iReddit ibona malunga ne-479,452 yabantu ababandakanyekayo nomxholo
Ngelixa iqonga elijolise kwingqesho i-LinkedIn inabasebenzisi abafaka izicelo zemisebenzi engama-69,444
Kodwa, ukubeka idatha ecaleni umzuzwana, kuthekani ngemali echithwa yonke iminithi kwi-intanethi? Abathengi kulindeleke ukuba bachithe malunga ne-1 yezigidi zeedola kwi-Intanethi.
Ngaphezu koko, Venmo abasebenzisi bathumela ngaphezulu kweedola ezingama-200 kwiintlawulo, ngaphezulu kweedola ezingama-3000 ezichithwe kwiiapps eziphathwayo.
Amazon, iqumrhu elidumileyo lokuthengisa kwi-intanethi, lithumela iimpahla eziyi-6,659 ngosuku (e-US kuphela). Ngeli xesha, ukuhanjiswa kwe-intanethi kunye neqonga lokuthatha iDoordash diners liodola malunga nezidlo ezingama-555.
Njengoko uluntu lwethu lukhula, amashishini kufuneka aziqhelanise nawo, nto leyo esoloko ifuna ukusetyenziswa kwedatha. Konke ukuswayipha, ukucofa, ukuthanda, okanye ukwabelana kunegalelo kwisiseko sedatha esikhulu ngakumbi, esinokukhokelela ekufumaneni iimfuno zabathengi bakho. Ngenxa yoko, xa la manani ehlolisiswa ngenyameko, inkcazelo efunyenweyo inokunceda ekuqondweni okulunge ngakumbi kwehlabathi elihamba ngesantya esiphezulu. Ngenxa ye-COVID-19, uninzi lweefemu zisebenza ngokwahlukileyo, kwaye ukuba nedatha yexesha lokwenyani malunga nokusebenza kwazo kunye nokusingqongileyo kunokubavumela ukuba benze izigqibo ezingcono ukuze baphile, kwaye baphumelele, ukuphendula.
tags: 2021abasebenzisi be-intanethi abasebenzayoAmazonFacebookgoogle duokwi-infographicIzibalo ze-instagramabasebenzisi be-intanethi beselulamanani e-intanethiUkusetyenziswa kwe-intanethiizibalo zokusetyenziswa kwe-intanethiAmaqela eMicrosoftingqondoizibalo zemidiya yoluntuimeko ye-bi kunye nohlalutyoimeko yeziko ledathaidatha ayilaliIzibalo ze-twitteryizaIifowuni zevidiyoiminxeba yelizwiizibalo ze-youtubeyenza nkulu